I-CRISPR kwakhona iyasimangalisa ngokuvumela ukucothiswa kokuthotywa kweendlebe kwiimpuku | Iindaba zeGajethi
I-CRISPR kwakhona iyasimangalisa ngokuvumela ukucothiswa kokuthotywa kweendlebe kwiimpuku
Ukuba ukhe wahlangabezana neemeko zokungeva kusapho lwakho, ngokuqinisekileyo ugqirha okanye ingcali, ngaphambi kokuba aqale ukusebenza, uya kuba ekuxwayisile ngokuchanekileyo indlebe yenye yeenkqubo ezintsonkothileyo ekufuneka umntu ajongane nazoInjalo imeko xa isaphuka, isilele okanye isiba mandundu, akunakulungiseka.
Ngale nto engqondweni, namhlanje ndifuna ukukuxelela ngenkqubela phambili entsha eyenziwe liqela labaphandi elenziwe ngoososayensi abavela e-China nase-United States, enkosi kwitekhnoloji. CRISPR, Ukunyanga ukuzalwa kokungeva okuzeleyo kusetyenziswa, ngenxa yesi sizathu, ngenaliti enye.
1 Ndiyabulela ekusetyenzisweni kweCRISPR, iqela labaphandi lisenokuba lifumene iyeza lokunyanga isithulu esibelekweni
2 Kuthatha umzali omnye kuphela ukuba abe nale ngxaki emntwaneni ukuba ayizuze njengelifa
3 Iziphumo zalo msebenzi zivuyise lonke uluntu lwenzululwazi
Ndiyabulela ekusetyenzisweni kweCRISPR, iqela labaphandi lisenokuba lifumene iyeza lokunyanga isithulu esibelekweni
Ukuya kwinkcukacha ezithe kratya kwaye ngakumbi kuthathelwa ingqalelo into eyapapashwa kwiphepha elibangelwe lolu phando, kubonakala ngathi izazinzulu kuye kwanyanzeleka ukuba zisebenze ukufumana umahluko phakathi kwe-genome echaphazelekayo kolu hlobo lukhethekileyo lokungeva nolukhutshwe kwindawo esempilweni. umntu. Iziphumo yayikukubakho kwendawo utshintsho oluncinci kuhlobo lwe-TMC1 ebangela ukuba le geni ivelise iprotein ehlaziya i-cilia.
Kuyabonakala ukuba yile nto ukuwohloka kwe-cilia, inoxanduva lokuguqula isandi sibe yimikhwa yentliziyo, ethi ekugqibeleni ibangele into eyaziwa ngokuba kukungeva ngokuzalwa. Ukusinika umbono, xelela nje ukuba utshintsho oluncinci, kangangokuba ikopi esempilweni yemfuza yahlukile kumtya ngokutshintsha ngonobumba omnye. Nje ukuba ingxaki ifunyanwe, ngomsebenzi ongaphaya kokunyanga, kwakufuneka ifunyanwe unyango.
Kuthatha umzali omnye kuphela ukuba abe nale ngxaki emntwaneni ukuba ayizuze njengelifa
Ukuze siqonde ngcono ingxaki yesizalo sokungeva, yithi nje, ngokweenzululwazi, kubonakala ngathi kunyanzelekile ukuba omnye wabazali babini abe nayo. Yi le ngokwaneleyo ukugqithisela kubantwana bakho. Njengoko uya kucinga ngokuqinisekileyo, nangona kubonakala ngathi kuchasene, inyani kukuba sijamelene notshintsho oluqheleke kakhulu kuluntu kunokuba sinokukholelwa.
Njengoko kuphawuliwe kwiingxelo UFyodor Urnov, omnye wababhali balo msebenzi kunye nonjingalwazi kwiAltius Institute for Biomedical Science eSeattle:
Ingathi iimvumi ezimbini zenza i-duet. Ukuba omnye wenu uphose, kufuneka uthuliswe ngokukhethekileyo ukuze uve isandi esifanelekileyo. Asinakumisa zombini iimvumi ngaxeshanye, kuba loo ngoma iya kuyeka.
Ngale nto, into ethethwa nguFyodor Urnov kukuba ekufuneni kwakhe unyango, akunyanzelekanga kuphela ukuba enze ukuba kungabikho mfuziselo ufumanekayo, kodwa kwafuneka azi kakuhle ukuba yintoni.
Iziphumo zalo msebenzi zivuyise lonke uluntu lwenzululwazi
Ukufumana unyango, izazinzulu ezisebenze kule projekthi kubonakala ngathi zisebenzise ulandelelwano oluncinci lwe-RNA ukuchonga ufuzo ekufuneka luvaliwe. Ndiyabulela koku, ngenxa yesenzo, inguquko evelisileyo Iprotein ebangele ukuba umntu abe nesithulu wazalwa engasebenzi.
Okwangoku, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba le projekthi ikwinqanaba lokuqala kakhulu lokukhula kwayo, nangona iziphumo ezizuziweyo zingaphezulu nje kokwanelisa. Okwangoku iimvavanyo zokuqala zenziwe kwiimpuku ezisandula kuzalwa ethi, emva kokunyangwa nasemva kweeveki ezine, iimpuku ezincinci sele zinamandla okuphendula kwizandi ezifikelela kwi-15 yeedecibels.
Nangona kunjalo uphando lusenendlela ende ekusafuneka luhambe de kube le ngxaki yokuva inganyangwa ebantwini, inyani yeyokuba, njengoko uluntu lwenzululwazi ngokwalo lubonisa, sijamelene nengqikelelo engazange ibonwe ngaphambili kuba iziphumo zinemincili kubo bonke abaphandi abasebenza namhlanje ukufumana isisombululo seengxaki ezithile zonyango besebenzisa ubunjineli bemfuza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » I-CRISPR kwakhona iyasimangalisa ngokuvumela ukucothiswa kokuthotywa kweendlebe kwiimpuku
IAmazon Music Unlimited isinika iinyanga ezimbini zasimahla zenqanaba losapho